Savorovoro teny Ankatso :: Niafara tamin’ny fahamaizan’ny tanety ny fitokonan’ny mpianatra • AoRaha
Savorovoro teny Ankatso Niafara tamin’ny fahamaizan’ny tanety ny fitokonan’ny mpianatra
Tranga mampala­helo. Niafara tamin’ ny fahamaizan’ny tanety ny savorovoro nateraky ny fitokonana nataon’ny mpianatra teny Ankatso, omaly. Ampahany tamin’ireo tanety teny amin’ny lalana no nahitana afo nijoalajoala. Tonga avy hatrany namono ny afo teny an-toerana kosa ny mpitandro filaminana.
“ Ireo kodiarana nodo­ranay nandritra ny fihetsike­tsehana no natositosik’ireo mpandray vola ao amin’ny taksibe sasantsasany. Notaritarihin’izy ireo tsy an-kijanona io kodiarana io, ka nahazo ny bozaka naniry teny an-toe­rana. Nitsoaka avy hatrany izy ireo rehefa nahita ny afo nirehitra. Hamafisiko anefa fa tsy ireo mpianatra velively no tompon’antoka tamin’izany”, hoy Rasoloninirina Odilon solontenan’ny mpianatra teny Ankatso.
Nanamafy ity solontenan’ ny mpianatra ao amin’ny sampam-pianarana siansa ity, fa fitakiana ny hiverenan’ny fampianarana no votoatin’ny hetsika nataon’izy ireo.
“ Efa hatramin’ny herinandro lasa teo no voatohintohina ny fampianarana. Nisy tamin’ ireo mpampianatra , ohatra , no tonga ihany saingy nisafidy ny tsy hampianatra izy ireo noho ny antony manokana avy amin’izy ireo. Nandritra izany no nanapahanay hevitra fa hiroso amin’ny fitokonana raha toa ka tsy misy ny fandrai­sana andraikitra”, hoy indray iry solontenan’ny mpianatra iry.
Nambarany fa ireo mpi­anatra ao amin’ny sampam-pampianarana siansa no tena lasibatra amin’ny tsy fiverenan’ny fampianarana. “ Efa nanomboka ny fanadinana ireo mpianatra amin’ny sampam-pianarana hafa, fa mbola tsy tonga amin’izany mihitsy izahay”, araka ny fanampim-panazavany. Nampiany fa hiezaka hanohy ny fitakiana tsy ao ana­tin’ny fihoaram-pefy izy ireo, anio.
Hopitaly Saint Benoit Menni Imerintsiatosika :: Efa misy eto amintsika ny fitsaboana aretin-tsaina amin’ny zavakanto